Na mgbakwunye na-ebufe kọntaktị site na gị ochie Samsung ekwentị na onye ọhụrụ, ọtụtụ ugboro ị nwekwara ike chọrọ kọntaktị na-synched na gị PC mere na i nwere ike iji ha dị ka ndabere, Central repository, ma ọ bụ a nna ukwu nchekwa data na i nwere ike iji mgbe ọ bụla ị chọrọ ka nwere kọntaktị atụkwasịkwara gị ngwaọrụ ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnyefee kọntaktị site na gị Samsung ekwentị gị PC eji ọtụtụ ụzọ, ebe a ị ga-amụta abụọ kacha ụzọ iji na-enweta ọrụ mere ngwa ngwa. Abụọ ndị a ụzọ bụ:
A. Nyefee Ndi ana-akpo site Gmail
B. Nyefee Ndi ana-akpo na Wondershare MobileGo
The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka n'ihi na ma ụzọ na-kọwara n'okpuru:
Usoro a na-eji a abụọ-nzọụkwụ usoro nyefee gị kọntaktị site na a Samsung ekwentị gị PC. Na nzọụkwụ mbụ ị mekọrịta gị Samsung kọntaktị ekwentị gị metụtara Gmail na akaụntụ, na nke abụọ nzọụkwụ ị mbupụ kọntaktị si Gmail akaụntụ na mpaghara diski ike mbanye nke gị PC. The kọntaktị nwere ike exported na a .csv ma ​​ọ bụ .vcf faịlụ, na faịlụ nwere ike dị ka ihe ngwa na PC ma ọ bụ a dị iche iche na ekwentị mkpanaaka karị. Ị nwere ike soro ntuziaka nyere n'okpuru ina ọrụ mere:
1. Ike na gị Samsung ekwentị mkpanaaka.
2. Hụ na ị kwukwara gị Gmail akaụntụ ekwentị gị.
Cheta: Ọ bụrụ na ị gbakwụnyere ihe akaụntụ, ị pụrụ ime otú site na ịga na Ntọala> Accounts> Tinye akaụntụ, na-ahọpụta Google si Add akaụntụ window, na mgbe ahụ na-eso ntụziaka site n'ebe ahụ.
3. Mepee égwu drawer.
4. Site egosipụta ndepụta nke ihe oyiyi, na mgbata Ndi ana-akpo.
5. Site meghere interface, enweta More akara ngosi (na akara ngosi na atọ vetikal ntụpọ) si n'elu-nri akuku.
6. Site egosipụta menu, enweta Paghaa ngwaọrụ kọntaktị ka nhọrọ.
7. Na Paghaa ngwaọrụ kọntaktị na igbe na Pop elu, enweta Google.
8. Na Paghaa kọntaktị na Google akaụntụ igbe, enweta OK.
9. Chere ruo mgbe kọntaktị site na gị Samsung ekwentị na-zigara gị Gmail akaụntụ.
10. Ozugbo mere, abanye na kọmputa gị.
11. Open ọ bụla nchọgharị weebụ gị oke na mgbe ahụ na-emeghe gị Gmail akaụntụ nke i bufee kọntaktị site na gị Samsung mobile.
12. Na meghere Gmail akaụntụ si interface, pịa ala-eche ihu akụ button ọzọ na Gmail akara ngosi.
13. Site egosipụta menu, pịa Ndi ana-akpo.
14. Mgbe na Ndi ana-akpo page, si nri ebi ndụ, ego isi checkbox si n'elu na họrọ niile kọntaktsị na ndepụta.
15. Pịa More button site n'elu.
16. Site egosipụta menu, pịa Export.
17. Site Export kọntaktị igbe na-egosi, n'okpuru Kedu kọntaktị ị chọrọ mbupụ ngalaba, pịa iji họrọ bọtịnụ redio na-anọchite anya ụdị nke kọntaktị na ị chọrọ mbupụ. (All kọntaktị na-ahọrọ ebe a.)
18. Site n'okpuru Kedu bupu format ngalaba, pịa iji họrọ bọtịnụ redio na-anọchi anya usoro ụdị nke na ị chọrọ mbupụ kọntaktị. (Outlook CSV format họrọ ebe a.)
19. N'ikpeazụ pịa Export button-echere ruo mgbe kọntaktị na-exported ka họrọ faịlụ ụdị.
Mgbe kọntaktị e exported ka họrọ usoro, i nwere ike iji na omenala usoro mbubata faịlụ ka chọrọ omume ma ọ bụ ekwentị ka ịgbakwunye kọntaktị maka inwekwu ojiji.
Nyefee kọntaktị site na gị Samsung ekwentị na PC na azụ na Wondershare MobileGo dị mfe ka tụnyere usoro kọwara n'elu. Ọ bụ ezie na ị ga-azụta a ikikere oyiri nke omume na-n'ụzọ zuru ezu ahu nagide ya niile atụmatụ, Wondershare MobileGo bụ uru ọ bụla pasent na ị na-etinye ego na ya. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ usoro nke-ebufe gị Samsung kọntaktị na PC eji Wondershare MobileGo a kọwara n'okpuru:
• Ọ dị ike media management software maka android nakwa dị ka iOS.
• The oké mkpa ngwá ọrụ kit na-ahụ na ijikwa ọdịnaya bụghị ike mgbe niile.
• The elu ọrụ ekwe ka onye ọrụ na-agbake data na ala na afọ ojuju
1. Abanye na gị na Windows ma ọ bụ Mac na kọmputa na otu akaụntụ ejide nhazi ikike. (A Windows kọmputa na-eji ebe a maka ngosipụta.)
2. Hụ na kọmputa nwere ihe njikọ Ịntanetị.
3. Mepee ọ bụla nchọgharị weebụ gị oke.
4. Gaa http://mobilego.wondershare.com/ na ibudata na kasị nso-nso version nke Wondershare MobileGo dị ka kwa kọmputa gị n'elu ikpo okwu (Windows ma ọ bụ Mac).
5. Mgbe nbudata, wụnye ihe omume na-ejikarị na mgbe echichi completes, igba egbe Wondershare MobileGo.
6. Ozugbo ị na-egosipụta na-akpa interface, jikọọ gị Samsung ekwentị na kọmputa na iji data USB na bịara tinyere na ya.
7. Chere maka Wondershare MobileGo ịchọpụta ekwentị gị na wụnye kwesịrị ekwesị ọkwọ ụgbọala na ya.
Rịba ama: USB debugging ga-nyeere na ekwentị gị iji kwe ka Wondershare MobileGo ịchọpụta na ekwentị gị. Ị nwere ike USB debugging na ekwentị gị site na ịga na Ntọala> Mmepụta nhọrọ na mgbe ahụ ịlele ahụ USB debugging checkbox.
Rịba ama: Ị nwekwara ike mkpa iji nye nkwenye gị na-ekwe ka ekwentị gị na-atụkwasị obi na kọmputa ka nke ọ na jikọọ.
8. Ozugbo Wondershare MobileGo achọpụta na ekwentị gị, site n'aka ekpe ebi ndụ nke MobileGo si interface na kọmputa, pịa iji họrọ Ndi ana-akpo nhọrọ.
9. Site n'elu nri ebi ndụ, pịa Export nhọrọ.
10. Site egosipụta ndepụta, pịa chọrọ format ma ọ bụ usoro ihe omume nke ị chọrọ mbupụ kọntaktị. (The ka vCard faịlụ nhọrọ họrọ ebe a maka ngosipụta.)
11. Na-agagharị N'ihi nchekwa igbe, pịa iji họrọ ebe nchekwa ma ọ bụ ike ọhụrụ otu (site na ịpị Mee New nchekwa bọtịnụ) ebe ị chọrọ ịzọpụta exported faịlụ.
13. Chere ruo mgbe kọntaktị na-exported ka họrọ faịlụ Ọkpụkpọ ma ọ bụ omume na ozugbo mere, na Export merie igbe pịa OK. Alternatively i nwere ike pịa Open nchekwa button aka ịchọta ndị exported faịlụ.
14. Ozugbo kọntaktị na-exported, ị nwere ike mbubata ha site na isoro n'elu nzọụkwụ si 1 ka 8 na mgbe ahụ ịnọgide na-eso ntụziaka n'okpuru:
15. Site n'elu nri ebi ndụ, pịa Import nhọrọ.
16. Site egosipụta ndepụta, họrọ faịlụ ma ọ bụ usoro ihe omume si ebe ị chọrọ mbubata kọntaktị. (The si vCard faịlụ nhọrọ họrọ ebe a.)
17. Na meghere Họrọ kọntaktị ị chọrọ mbubata igbe, ịchọta ndị faịlụ na ị chọrọ mbubata na pịa Open na ala.
18. Na Import vCard Ndi ana-akpo igbe (egosipụta naanị mgbe vCard faịlụ a ga-dị), pịa OK na-amalite importing kọntaktị na ndabara ọnọdụ.
Rịba ama: Ka ịgbanwee ebe ebe ebe ị chọrọ kọntaktị na-dị (dị ka a akpan akpan ndekọ na ekwentị gị), ị nwere ike pịa Họrọ a kọntaktị akaụntụ dobe-ala ndepụta ma họrọ chọrọ ebe maka importing n'ihu na ịpị OK bọtịnụ .
N'agbanyeghị nke ọtụtụ uzo ozo dị nyefee kọntaktị site na gị Samsung smartphone gị PC, abụọ ụzọ kọwara n'elu bụ mfe, dị ọnụ ala na ọtụtụ ịrụ ọrụ nke ọma ndị na-eji.
> Resource> Nyefee> otú nyefee Ndi ana-akpo si a Samsung Smartphone ka PC